Burlington CJC waxay ku dadaaleysaa inay noqoto dhibbane / badbaado-kudhisan iyo jahwareer lagu wargaliyo dhamaan barnaamijyadeena iyo dhaqamadeena. Marka lagu daro barnaamijkeenna Caddaaladda ee Dhibbanayaasha Dembiyada , Xiriiriyaasheena Dhibbanayaashu waxay la shaqeeyaan dhinacyada ay khusayso marka qofka mas'uulka ah loo gudbiyo hannaanka caddaaladda ee soo celinta.
Doorka Xiriiriyaha Dhibbanaha ee Guddigii Cadaaladda ee Dib-u-Celinta
Waxaan hubineynaa in kuwa dambiga uu saameeyay lasiiyay kaqeybgal geedi socodka dib udejinta. Xiriiriyaha Dhibbanaha wuxuu ku xiraa guddiga caddaaladda dib u soo celinta (matalaya bulshada) iyo kuwa dembigu saameeyay. Doorka ugu weyn ee Xiriiriyaha Dhibbanaha waa inay siiyaan macluumaad ku filan iyo taageero dhibbanaha / badbaadaha / qofka ay khusayso si loogu oggolaado kaqeybgal ammaan iyo macno leh.
Markay dhibbanayaasha / badbaadayaasha / dhinacyada ay khusayso doortaan inaysan ka qaybqaadan nidaamka caddaaladda dib u soo celinta, Xiriiriyaha Dhibbanaha wuxuu isku dayaa inuu habeeyo habab kale oo loola wadaago macluumaadka ku saabsan saameynta dembiga guddiga caddaaladda dib u soo celinta, iyo ugu dambeyn cidda mas'uulka ka ah. Tani waxay xaqiijineysaa in qofka masuulka ah uu fahmo saameynta ficilladooda ay ku leeyihiin kuwa kale isla markaana uu ku kordhin karo wax ka bedelkooda dhibbanaha / badbaadaha / qofka ay khusayso.
Kuuma sheegi karo sida aan ugu faraxsanahay inaan arko lacag bixinta ugu horreysa ee laga helo (John).
Waan aqaanaa (John) in muddo ah shakiyana waan qabay haddii aan waligey arki doonno nooc kasta oo qirasho ah oo aan ku sameeyo qalad. Waxaad iisoo ceshatay rumaysadkeygii nooc ka mid ah nidaamka lacag bixintaan helay.
Waad ku mahadsantahay wada xiriirkaaga weyn ee ku saabsan arintaan.
“U adeegida dhibbanayaasha dambiyada iyadoo loo marayo cadaalada la soo celiyo: Tilmaamaha Kheyraadka ee Hogaamiyaasha iyo Xirfadleyda” , warbixin ka socota Alberta, Canada oo laga helo Xarunta Vermont ee Adeegyada Dhibbanayaasha Dembiyada.